WOWOW Jikada Keliyaal Single Bowl Isku Dheelan Weelka iyo Maskaxda
Bogga ugu weyn / Sinks jikada / WOWOW Jikada Weelka Keli ah ee Sicirka leh ee Shabakadda iyo Dheecaanka 30 inji
WOWOW Jikada Kaliya ee KUNA FARAN GARAN IYO MARXII 30 inji
Jikada gudaheeda, waaskada lama huraanka ah, laakiin saxanka badanaa waa la iska indhatirayaa, naqshadeynta kaliya ma ahan, laakiin sidoo kale waxay ka maqan tahay qurux. WOWOW waxay bixisaa weel wanaagsan oo si weyn u kordhin kara dareenka raaxada ee jikada.
WOWOW Double Bowl jikada Sink with Grid iyo Dr ...
Saxanka weelka si wanaagsan ayaa loo xushay, markaa wax dhib ah malahan dheriga dhaqiddiisa! Doorashada saxanka saxda ah wuxuu ka dhigayaa jikada oo dhan mid dhalaalaysa waxayna dadka ka dhigeysaa mid wanaagsan marka ay jikada galaan. Waa u fududahay sida jacaylka suxuunta oo loo jeclaado cunto karinta!
DIIWAAN-GALIN: 30 in. L x 19 in. W x 10 in. D; Cabirka Golaha Ugu Yar: 33 in.
304 birta birta ka sameysan ee birta ah, tiknoolajiyadda dusha sare ee la caddeeyey, xoqidda iyo xirashada iska caabin, fududahay in la nadiifiyo u dhigma qalabka jikada badankood.
Tilmaamaha jeex-jeexjeexyada habboon: godan qotodheer, afar-geeska leh waxaa ku qalabeysan qulqulo biyo-marsiin ah oo hagaya biyaha isla markaana hubinaya in bullaacadda ugu wanaagsan ee suurogalka ah.
Xirmada ayaa la socota weelka jikada oo 30-inji ah, biyo-fadhiis bullaacad iyo weel-biyo raacis.
Adeeg: 3-bilood soo laabasho dhib la'aan iyo lacag celin, pls kalsooni ku iibsato. Haddii aad wax su'aal ah qabtid, ku soo dhawoow nala soo xiriir.
SKU: W70101-30-AMUS Category: Sinks jikada Tags: baaquli hal, birta birta ah, hoos u dhac
Cabbirka Golaha Ugu Yar
304 ahama Steel